High Index Feo-kiraro matevina China Manufacturer
Description:High Index Reflective Glass Beads,High Index Feo-kiraro matevina,High Index Glasperne
Home > Products > Fehezam-boninkazo vita amin&#39;ny hoditra > High Index Feo-kiraro matevina
Akanjo fitaratra fitaratra amin'ny karazana loko manokana mandritra ny famokarana mba hampitombo ny fatran-jiro amin'ny labozia.
Ny hafanana dia tsy hifikitra eo amin'ny tendron'ity karazana glasy ity mora amin'ny toe-javatra misy ny andro rain'ny orana sy / na manjavozavo, hany ka mihena ny fiantraikany ratsy amin'ny fandinihan-tena amin'ny toetr'andro ratsy.
Ireo no avo lenta avo lenta avo lenta eo anelanelan'ny 1 sy 850 mikrons manome ny sanda ara-pifamoivoizana mahazatra miaraka amin'ny ≥80%. Izy ireo dia novokarina araka ny fenitra nasionaly sy iraisam-pirenena (EN 1423, AASHTO, sns.).
Ny fampiasana ny loko eny an-dàlana, ny plastika vita amin'ny thermo sy thermospray, ny plastika mangatsiaka sy mangatsiaka.
Ireo kofehy vita amin'ny hoditra manokana amin'ny famokarana kofehy fitaratra. Amin'ny toetran'ny orana sy ny orana, ny hatsikana dia tsy afaka mijanona mora foana amin'ny rindrin'ny glasy, noho izany dia hampihenana ny fiantraikany amin'ny fandinihan-tena vokatry ny toetr'andro ratsy. Ny granulometry amin'ireny karazana glasy ireny dia mitovy amin'ny kofehy vita amin'ny verba tsy misy loko.
Product Categories : Fehezam-boninkazo vita amin'ny hoditra
Quality Microspheres High Quality Mikirozoka Contact Now
High Quality Fiarovan-jiro matevina Contact Now
EN1423 / EN1424 Fahazarana Fefy-Porofo matevina Contact Now
Toetry ny vy sy vy ny porofo Contact Now
AASHTO M247 Fahamendrehana Fahamendrehana-Kitapo Fotsy Contact Now
KSL2521 Fitsipika Fehezam-boninkazo vita amin'ny hoditra Contact Now
JIS R3301 ny mari-pandrefesana fanamainana vita amin'ny hoditra Contact Now
High Retro-Reflection Fiber-Proof Glass Beads Contact Now
High Index Reflective Glass Beads High Index Feo-kiraro matevina High Index Glasperne High Retro Reflective Glass Bead High Index S-Brilliance Reflective Glass Beads High Perm-Reflexive Glass Beads Reflective Glass Beads High Quality Reflectivity Glass Beads